Oge dijitalụ na-eme ka ịchọta ihe omume na omume siri ike ma na-ekepụta ohere ọhụụ maka ntinyeghị ihe omume.
N'akụkọ ihe atụ nke nlele, e nweela ụzọ abụọ na-abịaru nso: usoro ntinye nke puru omume na usoro ntinyeghị ihe gbasara omume. Ọ bụ ezie na a na-ejikọta ha abụọ na mmalite nke sampling, ihe nlele nke puru omume abiawo, ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta mmadụ na-akụzikwara ịlele nlele na-enweghị atụ na nnukwu obi abụọ. Otú ọ dị, dịka m ga-akọwa n'okpuru ebe a, mgbanwe ndị ọgbọ nke oge a gbanwere na-egosi na ọ bụ oge maka ndị na-eme nnyocha ka ha chegharịa na ị gaghị emetụ ụdị ihe a. Karịsịa, sampling probability na-esiri ike ime na omume, na ntanetịghị ụdị nnweta nwere ngwa ngwa, dị ọnụ ala, na ka mma. Nnyocha ndị dị oke ọnụ ma dị ọnụ ala anaghị agwụ naanị n'ime onwe ha: ha na-enye ohere ndị ọhụrụ dịka nyocha ndị ọzọ na ntanetị dị ukwuu. Dịka ọmụmaatụ, site n'iji usoro enweghị ihe ịga nke ọma mee nchọpụta Ntụle Ihe Nlekọta Nzukọ Na-arụkọ Ọrụ (CCES) nwere ike inwe ihe dịka ugboro 10 karịa ndị nkuzi mbụ na-eji ihe gbasara nke puru omume. Nlereanya a dị ukwuu karị na-eme ka ndị nchọpụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị nyochaa mgbanwe na àgwà na omume n'akụkụ nchịkọta ndị isi na mmekọrịta ọha mmadụ. Ọzọkwa, ihe a dum gbakwunyere na-enweghị mbelata na atụmatụ atụmatụ (Ansolabehere and Rivers 2013) .
Ka ọ dị ugbu a, ụzọ kachasị mma maka nyocha maka nchọpụta mmekọrịta mmadụ nwere ike ịchọta . N'ihe nlele nke puru omume, ndị niile nọ n'òtù ahụ nwere ohere mara, ọ ga-abụ na enwere ike ịchọta ya, na ndị niile a tụlere na-azaghachi nyocha ahụ. Mgbe ọnọdụ ndị a zutere, njirimara nke mgbakọ na mwepụ na-enye ihe akaebe a na-ahụ anya banyere ikike onye na-eme nnyocha iji jiri ihe nlele mee ihe gbasara ọnụọgụ anya.
Otú ọ dị, n'ụwa n'ezie, ọnọdụ ndị na-akpata ihe mgbakọ na mwepụ ndị a adịghị adaba. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike imechi njehie na enweghị akwụkwọ. N'ihi nsogbu ndị a, ndị na-eme nchọpụta na-ejikarị iji mgbanwe dịgasị iche iche na-eme mgbanwe iji mee ka ha ghara iji ihe atụ ha na-atụle ọnụ ọgụgụ ha. Ya mere, ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị n'etiti ihe gbasara ihe gbasara ogwu puru iche na tiori , nke siri ike nke oma, na ntinye aka n'ekwe omume , nke na-enyeghi ihe di otua ma dabere na mgbanwe di iche iche.
Ka oge na-aga, ọdịiche dị n'etiti ihe gbasara nke puru omume na tiopụtara na ihe gbasara nke puru omume na-emewanye. Dịka ọmụmaatụ, ọnụ ọgụgụ ndị na-adịghị akwụ ụgwọ na-arịwanye elu, ọbụna na ogo, nyocha ọrịre (nọmba nke 3.5) (National Research Council 2013; BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Ọnụ ọgụgụ nonresponse dị elu karị na nchọpụta ekwentị-mgbe ụfọdụ ọbụlagodi 90% (Kohut et al. 2012) . Ọganihu ndị a na-abụghị nke na-eme ka atụmatụ dị njọ n'ihi na ọnụ ọgụgụ ahụ na-adabere na usoro nchịkọta akụkọ nke ndị nchọpụta na-eji mee mgbanwe maka enweghị akwụkwọ. Ọzọkwa, mmụba ndị a emeelarịrị ọ bụ ezie na ndị na-eme nchọpụta na-eme mgbalị siri ike ịnọgide na-enwe ọnụ ọgụgụ dị elu. Ụfọdụ ndị na-atụ ụjọ na njirimara ejima ndị ahụ na-abawanye mma na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu na-eyi ntọala nke nchọpụta nnyocha (National Research Council 2013) .
Ntụle nke 3.5: Nkwekọrịta adịghị arịwanye elu, ọbụna na nyocha dị oke ọnụ (National Research Council 2013; BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Ọnụ ọgụgụ nonresponse dị elu maka nchọpụta ekwentị, mgbe ụfọdụ ọbụlagodi 90% (Kohut et al. 2012) . Ihe ndị a ogologo oge na nonresponse pụtara na nchịkọta data dị oke ọnụ ma atụmatụ enweghị atụ. E si n'aka BD Meyer, Mok, and Sullivan (2015) , nke 1.
N'otu oge ahụ na enwere nsogbu na-arịwanye elu maka usoro ntanetịime ihe omume, enwerekwa ọganihu na-akpali akpali na ụzọ ntanetịghị emetụta . E nwere ụzọ dịgasị iche iche nke usoro ntinyeghị ihe gbasara nke puru omume, ma otu ihe ha nwere bụ na ha agaghị adịrị mfe n'usoro mgbakọ na mwepụ nke ihe gbasara nke puru omume (Baker et al. 2013) . N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na usoro ntinyeghị ihe gbasara ụdị omume ọ bụghị onye ọ bụla nwere ihe gbasara omume nke mara na nke na-abụghị nonbero. Usoro nchọta na-enweghị ihe ịga nke ọma nwere aha ọjọọ n'etiti ndị na-eme nchọpụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ha jikọtara ụfọdụ n'ime nchọpụta kachasị dị ịrịba ama nke ndị nchọpụta nyocha, dịka Literary Digest fiasco (tụlere na mbụ) na "Dewey Defeats Truman," amụma na-ezighị ezi banyere US. ntuli aka ntuli aka nke 1948 (nkeji 3.6).
Akara 3.6: Onye isi oche Harry Truman na-ejide akwụkwọ akụkọ nke akwụkwọ akụkọ na-ezighị ezi ọkwa na emeri ya. Edebere isiokwu a na akụkụ nke atụmatụ ndị na-abụghị nke puru omume (Mosteller 1949; Bean 1950; Freedman, Pisani, and Purves 2007) . Ọ bụ ezie na "Dewey Defeats Truman" mere na 1948, ọ ka bụ otu n'ime ihe mere ụfọdụ ndị nchọpụta ji enwe obi abụọ banyere atụmatụ site na ihe atụ ndị na-abụghị nke puru omume. Isi: Harry S. Truman Library & Museum .
Otu ụdị nke ntinyeghị ihe gbasara nke puru omume nke kwesiri ka oge dijitalia bu ojiji nke ulo oru ntaneti . Ndị na-eme nchọpụta na-eji ntanetị na-adabere na ụfọdụ ndị na-enye ọrụ-na-abụkarị ụlọ ọrụ, ọchịchị, ma ọ bụ mahadum - iji wuo otu ìgwè dị iche iche nke ndị kwenyere na ha ga-aza ajụjụ maka nyocha. A na - ejikarị ndị a na - esonyere ndị a na - eji ọrụ dịgasị iche iche dịka mgbasa ozi n'ịntanetị. Mgbe ahụ, onye na-eme nchọpụta nwere ike ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ahụ maka ịnweta ihe atụ nke ndị nabatara na njirimara achọrọ (dịka, nnọchite anya mba nke ndị okenye). Mpempe akwụkwọ ndị a dị ntanetị bụ usoro na-enweghị ihe ịga nke ọma n'ihi na ọ bụghị onye ọ bụla nwere ihe a maara, ọ gaghị enwe ike itinye ya. Ọ bụ ezie na ndị na-eme nchọpụta mmadụ (eg, CCES) na-eji usoro ntanetị enweghị ntanetị mee ihe ugbu a, a ka nwere ụfọdụ arụmụka gbasara àgwà nke atụmatụ ha (Callegaro et al. 2014) .
N'agbanyeghị arụrịta ụka ndị a, ana m eche na e nwere ihe abụọ mere oge ji dị mma maka ndị na-eme nchọpụta mmadụ iji chebaa atụghị anya na-enweghị atụ. Mbụ, na afọ dijitalụ, ọtụtụ ihe dị iche iche na nchịkọta na nyochaa nke ihe atụ enweghị atụ. Ụzọ ọhụrụ ndị a dị iche iche site na usoro ndị kpatara nsogbu n'oge gara aga na echere m na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na ha bụ "enweghị ihe nlele 2.0". Ihe nke abụọ mere ndị na-eme nchọpụta kwesịrị iji tụgharịa uche na-enweghị ihe gbasara nke a bụ n'ihi na ị nwere ike ịchọta ya omume na-esiwanye ike. Mgbe enwere oke nzaghachi nke nzaghachi-dịka enwere nyocha ugbu a-enweghi ike ịbanye maka ndị nabatara ya, ya mere, ihe atụ na ihe ndị na-abụghị ihe gbasara nke a abụghị ụdị dị iche iche ndị ọkachamara kweere.
Dị ka m kwuru na mbụ, ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta na-ele ndị na-eme nchọpụta na-enweghị nchekasị, n'ihi na ha na-arụ ọrụ ụfọdụ n'ime nkwụsị kachasị emenye ihere n'oge mbido nnyocha nyocha. Ihe nkowa doro anya nke ókè anyị si bịa na ihe ndị a na-agaghị emeli bụ nchọpụta anyị bụ Wei Wang, David Rothschild, Sharad Goel, na Andrew Gelman (2015) na nwetaghachiri nghoputa nke ntuli aka US 2012 na-eji ntinyeghị ihe atụ nke Ndị ọrụ Xbox American - ndị na-esiteghị na ndị America. Ndị nchọpụta ahụ natara ndị si na XBox na-egwu egwu egwuregwu, na dịka ị nwere ike ịtụ anya, ụmụ Xbox na-ezighị ezi na ndị na-eto eto: ndị okenye 18 ruo 29 nwere pasent 19 nke ndị a na-ahọpụta ma 65% nke ihe nnọchianya Xbox, na ndị ikom ha nwere pasent 47 nke ndị nhoputa ndi ochichi ma 93% nke ngwa Xbox (nọmba 3.7). N'ihi ihe ndị a siri ike nke igwe mmadụ, data data Xbox bụ ihe na-adịghị mma nke nloghachi ntuli aka. O buru amụma na Mitt Romney nwere mmeri dị ukwuu karịa Barack Obama. Ọzọkwa, nke a bụ ihe atụ ọzọ nke ihe ize ndụ nke ihe ndị na-adịghị emerụ ahụ, nke a na-emezighị emezi nakwa na ọ na-ebute Akwụkwọ Liteest Digest fiasco.
Akwukwo nke 3.7: Demographics of respondents in W. Wang et al. (2015) . N'ihi na a nabatara ndị nabatara na XBox, ha nwere ike ịbụ ndị na-eto eto ma yikarịrị ka ha ga-abụ nwoke, ndị ikwu gbasara ndị ntuli aka na ntuli aka 2012. E si n'aka W. Wang et al. (2015) , onu ogugu 1.
Otú ọ dị, Wang na ndị ọrụ ibe ya maara nsogbu ndị a ma gbalịa imezi maka usoro nchịkọta na-abụghị nke ha mgbe ha na-eme atụmatụ. Karịsịa, ha na-eji post-stratification , usoro nke a na-ejikarị mee ihe iji dozie ihe gbasara nke puru omume nke nwere ihe mmechi njehie na nzaghachi.
Echiche bụ isi nke post-stratification bụ iji ozi inyeaka gbasara ndị elebara anya iji nyere aka melite atụmatụ ahụ sitere na nlele. Mgbe ha na-eji post-stratification mee atụmatụ site na nyocha ha na-abụghị nke puru omume, Wang na onye ọrụ ibe ya mere ka ndị mmadụ ghọọ ndị dị iche iche, me atụmatụ nkwado maka Obama na nke ọ bụla, wee wezie ọnụ ọgụgụ nke ndị otu atụmatụ iji mepụta atụmatụ zuru ezu. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike kewaa ndị mmadụ n'ime ìgwè abụọ (ndị ikom na ndị inyom), mere atụmatụ nkwado maka Obama n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, wee mezie atụmatụ nkwado zuru oke maka Obama site na iji ọnụ ọgụgụ dị ala iji kọọ maka eziokwu ndị inyom elu 53% nke ndi onu ogugu na ndi mmadu 47%. N'ụzọ siri ike, post-stratification na-enyere aka na-edozi maka ihe atụ na-adịghị mma site n'inweta ozi inyeaka gbasara ogo dị iche iche.
Isi ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị kwadoro bụ ịmepụta ndị otu aka. Ọ bụrụ na ị nwere ike ibelata ọnụ ọgụgụ ndị ahụ ka ha bụrụ otu dị iche iche dịka ụdị mmeghachi omume ndị ahụ bụ otu maka onye ọ bụla n'ime ìgwè ọ bụla, mgbe ahụ, post-stratification ga-emepụta atụmatụ ezighi ezi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mmechi site na okike ga-emepụta atụmatụ ezighi ezi ma ọ bụrụ na mmadụ niile nwere nzaghachi omume ma ụmụ nwanyị niile nwere otu nzaghachi omume. Echere na a na-akpọ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche-na-arụ ọrụ-na-arụ ọrụ dị iche iche, m na-akọwa ya ntakịrị ihe na mgbakọ na mwepụ na njedebe nke isi nke a.
N'ezie, o yighị ka nzaghachi omume ahụ ga-abụ otu maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị niile. Otú ọ dị, mmeghachi omume na-agbanwe agbanwe-ihe ndị dị n'ime-iche iche na-aghọ ihe dị mma karịa ọnụ ọgụgụ nke ndị otu na-amụba. O siri ike, ọ ga-adịrị mfe ịpịa ndị mmadụ dị iche iche dị iche iche ma ọ bụrụ na ị mepụta otu ìgwè dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike iyi ihe ọhụụ na ụmụ nwanyị niile nwere otu ihe ahụ, ma ọ nwere ike iyi ihe dị mma karị na enwere otu nzaghachi omume maka ụmụ nwanyị niile dị afọ 18-29, ndị gụsịrị akwụkwọ na mahadum, na ndị bi na California . N'ihi ya, dịka ọnụọgụ nke ìgwè ndị e ji mee ihe na post-stratification na-ebuwanye ibu, echiche ndị dị mkpa iji kwado usoro ahụ ghọkwuo ezi uche. N'iburu nke a, ndị na-eme nchọpụta na-achọkarị ịmepụta ọtụtụ ìgwè dị iche iche maka post-stratification. Otú ọ dị, dịka ọnụọgụgụ nke ìgwè dịkwuo, ndị nchọpụta na-agba ọsọ na nsogbu dị iche: data na-agbasa. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ dị ole na ole dị na otu ọ bụla, mgbe ahụ atụmatụ ahụ ga-ejighị n'aka, na na ikpe kachasị ebe otu ìgwè nwere ndị na-enweghị ndị na-azaghachi, mgbe ahụ, ọ ga-emecha gbanwee.
Enwere ụzọ abụọ site na esemokwu a dị n'etiti ọdịda dị iche iche nke nzaghachi-nzaghachi-nke dị n'ime-iche iche na nchọta maka nhapụta dị mma na nke ọ bụla. Nke mbụ, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịnakọta ụdị dị ukwuu, dịgasị iche iche, nke na-enyere aka hụ nhụzi dị oke nha na nke ọ bụla. Nke abuo, ha nwere ike iji usoro ihe omuma di omimi karia maka ime mkpebi n'ime ndi otu. Na, n'eziokwu, mgbe ụfọdụ, ndị nchọpụta na-eme ma, dịka Wang na ndị ọrụ ibe ha mere nyocha nke nhoputa ndi ochichi site na Xbox.
N'ihi na ha na-eji usoro ntinyeghị ihe gbasara nke puru omume na mkparịta ụka nyochaa na kọmputa (M ga-ekwurịtakwu banyere ajụjụ ọnụ na kọmputa na mpaghara 3.5), Wang na ndị ọrụ ibe nwere nnukwu nchịkọta data, nke mere ka ha nwee ike ịnakọta ozi site na 345,858 ndị nnọchianya pụrụ iche , ọnụ ọgụgụ dị ukwuu site n'ụkpụrụ nhoputa ntuli aka. Nke a dị oke nha nyeere ha aka ịmalite ịba ụba nke ìgwè dị iche iche. Ọ bụ ezie na mgbatị na-agụnye ịpịa ndị mmadụ na narị otu narị, Wang na ndị ọrụ ibe kewara ndị mmadụ na òtù 176,256 akọwapụtara site na okike (ụdị 2), agbụrụ (edemede anọ), afọ (4 ngalaba), agụmakwụkwọ (ngalaba 4), steeti (Edemede 51), ID nke otu (edemede atọ), nkuzi (ụzọ atọ), na mpịakọta 2008 (atọ edemede). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nnukwu nlele ha, bụ nke nchịkọta data na-akwụ ụgwọ, nyeere ha aka ịmekwu ihe dị mma n'usoro usoro atụmatụ ha.
Ọbụna ndị nwere mmadụ 345,858 pụrụ iche, ma, a ka nwere ọtụtụ, ọtụtụ ìgwè nke Wang na ndị ọrụ ibe ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-anabata ya. Ya mere, ha jiri usoro a na - akpọ regression multilevel iji kwado nkwado na nke ọ bụla. N'ikwu nke a, iji kwado nkwado maka Obama n'ime otu otu, usoro nchịkọta nke multilevel regulatara ozi sitere n'aka ọtụtụ ndị metụtara ya. Dịka ọmụmaatụ, were ya na ị na-agbalị ịchọta nkwado maka Obama n'etiti ụmụ nwanyị Hispanics n'etiti afọ 18 na afọ 29, bụ ndị gụsịrị akwụkwọ na mahadum, ndị a na-edebanye aha Democrats, ndị na-achọpụta onwe ha dị ka ndị na-eme ihe, na ndị gọọmenti Obama na 2008. Nke a bụ nnọọ , otu a kapịrị ọnụ, ọ ga-ekwe omume na ọ dịghị onye na sample ahụ nwere àgwà ndị a. Ya mere, iji mee atụmatụ banyere otu a, ịmeghari regression na-eji usoro ihe ndekọ edekọ iji mee ka ọnụ na-atụkọta ọnụ site na ndị mmadụ dị n'otu.
Ya mere, Wang na ndị ọrụ ibe ha ji usoro nke jikọtara regression ọtụtụ na post-stratification, n'ihi ya, ha kpọrọ usoro ha na-eme ka ọtụtụ ndị na-eme mgbanwe ma ọ bụ karịa, "Mbụ. P. "Mgbe Wang na ndị ọrụ ibe ya jiri Mr. P. mee atụmatụ site na XBox na-abụghị ihe gbasara nke puru omume, ha mepụtara atụmatụ dị nso na nkwado niile Obama nyere na ntuli aka 2012 (nọmba 3.8). N'ezie, atụmatụ ha dị mma karịa nchịkọta nke ntuli aka nke ọha na eze. Ya mere, na nke a, mgbanwe nchịkọta akụkọ-kpọmkwem Mr. P.-yiri ka ọ ga-arụ ọrụ dị mma na-edozi ihe ndị ahụ na-enweghị mmasị na data na-abụghị nke puru omume; mmechi anya nke a na-ahụ anya mgbe ị na-ele atụmatụ ahụ site na data Xbox na-adịghị edozi.
Akara 3.8: Atụmatụ site n'aka W. Wang et al. (2015) . Ntụle XBox a kwadoro na-emezighị emezi mepụtara atụmatụ ezighi ezi. Ma, ihe ngosi XBox dị uchu mepụtara atụmatụ nke ziri ezi karịa nkezi nke nyocha ekwentị. E si n'aka W. Wang et al. (2015) , ọnụ ọgụgụ nke 2 na nke 3.
E nwere ihe abụọ dị mkpa site n'ọmụmụ banyere Wang na ndị ọrụ ibe gị. Nke mbụ, ihe a na-emezighị emezi nke na-abụghị nke puru omume nwere ike ibute atụmatụ ọjọọ; nke a bụ ihe ọtụtụ ndị nchọpụta nụworo tupu oge a. Ihe nke abụọ, Otú ọ dị, nke a bụ na ihe ndị na - abụghị ihe gbasara omume, mgbe a nyochachara ya nke ọma, nwere ike ịmepụta ezigbo atụmatụ; ihe ndi ozo enwegh ike iburu ihe dika Literary Digest fiasco.
Na-aga n'ihu, ọ bụrụ na ị na-agbalị ikpebi n'etiti iji mgbagwoju anya gbasara ịchọta ihe na ihe ịga nke ọma na ị ga-eche ihe siri ike. Mgbe ụfọdụ ndị na-eme nchọpụta chọrọ ijikwa ọsọ ọsọ (dịka, na-ejikarị usoro ihe ntanetị eme ihe), mana ọ na-esiwanye ike inye iwu dị otú ahụ. Ndị nchọpụta na-enwe nhọrọ siri ike n'etiti ụzọ ntanetị nwere ike ịme omume-nke na-arịwanye elu ma dị anya site na nsonaazụ ọchụchọ ndị na-egosi na ha ejiri ụzọ-na-abụghị nke nwere ike ịchọta ụzọ-nke dị ọnụ ala na ngwa ngwa, ma amaghị nke ọma ma dịgasị iche iche. Otu ihe doro anya bụ na ọ bụrụ na a manyere gị ka ị rụọ ọrụ na ihe ndị a na-enweghị ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị na-edepụta ihe isi mmalite data (chetaghachi na Isi nke 2), mgbe ahụ, e nwere ezigbo ihe mere ị ga-eji kwere na e mere atụmatụ na-eji post-stratification na usoro ndi ozo ga adi nma karia ihe a na-achoghi edozi, ihe ndi ozo.